Laftagareen iyo Shariif Sakiin oo markii ugu horeysay kulmay | KEYDMEDIA ONLINE
Laftagareen iyo Shariif Sakiin oo markii ugu horeysay kulmay
Madaxweynaha KGS Cabdicasiis Laftagareen ayaa markii ugu horreysay la kulmay Madaxweynihii isaga ka horreeyay ee Shariif Xasan Sheekh Aadan.
MUQDISHO, Soomaaliya - Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagareen ayaa la kulmay Madaxweynihii hore ee Koonfur Galbeed ahna musharrax Madaxweyne JFS 2021 Shariif Xasan Sheekh Aadan, iyagoo meesha ka saaray madmadowgii siyaasadeed ee u dhaxeeyay.
Tan iyo markii lagu qasbay Shariif Xasan inuu is casilo, islamarkaana uusan isku soo sharrixin, waxa uu ka ahaa dibad-joog degaannada maamulkaasi, marnaba ma aysan kulmin Madaxweynaha xoogga lagu keenay KGS balse xalay ayey labada Madaxweyne ku kulmeen magaalada Muqdisho.
Kulankan ayaa waxaa ka soo shaqeeyay Xildhibaano ka tirsan Koonfur Galbeed iyo mas’uuliyiin kale, si ay tallaabadan bilow ugu noqoto dib u heshiisiinta siyaasadeed iyo doorasho daah furan oo dalka ka dhacda.
Heshiiskii Khamiistii lagu gaaray Teendhada Afisiyooni kaddib waxaa billowday kulamo iyo xiriirro toosa kuwaasoo ay yeelanayaan siyaasiyiinta Soomaalida, waxaana durba billowday ololihii doorashada madaxweynaha.